Qarax miino oo ka dhacay Magaalada Baledweyne | Puntland Today
Qarax miino oo ka dhacay Magaalada Baledweyne
Posted on February 15, 2017 by Dal Joog	Beledweyn-(P-TODAY)-Qarax Miino ayaa wuxuu ka dhacay Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, iyadoo qaraxaasi lagu aasay meel ku dhaw Buundo labaad Baledweyne.
Wararka waxa ay sheegayaan in qaraxaasi xilliga uu dhacaayay goobta ay marayeen ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika Amisom ee ka howlgala Magaalada Baledweyne.
Lama oga rasmi ahaan Khasaaraha ka dhashay qaraxan oo soo gaaray kolonyada Amisom ee halkaasi mareysay xilliga qaraxa miinada ah lala bartilmaameedsanaayay.
Jugta qaraxa ayaa si weyn looga maqlay Afarta Xaafadood ee Magaalada Baledweyne, maadaama xilliga qaraxa uu dhacaayay jawiga uu ahaa mid degan.
Ciidamada Amisom oo aanan ridin wax rasaas ah ayaa la sheegay inay ka gudbeen Buundo labaad, waxaana goobtaasi gaaray Saraakiisha ciidamada Booliska ee Magaalada Baledweyne.
Qof ku sugan magaalada Baledweyne, ayaa sheegay xaalada inay tahay mid degan, islamarkaana ciidamada Booliska ay sameeyeen baaritaano ammaanka ay ku xaqiijinayaan.